Zeynab Xaabsey oo ka badbaadday isku day dil | KEYDMEDIA ENGLISH
Zeynab Xaabsey oo ka badbaadday isku day dil
Maanta Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad u adeegsanaya waddada qaraxu ka dhacay, xilli la filayo in 20 ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ay khudbado ka jeedin doonaan kulanka Baarlamaanka, oo ka dhacaya Afisyooni.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhawaqa qarax xooggan ayaa laga maqlay agagaarka Isgoyska KM-4, gaar ahaan waddada aadda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, inta u dhaxeysa Hotel Afriik iyo bar koontaroolka 1-aad ee waddada garoonka.
Goob joogayaal ayaa Keydmedia qeybteeda English-ka u sheegay in Qaraxa uu yimid kadib markii nin Ismiidaamiyay uu isku qarxiyay Koontaroolka, oo ah goob ay adag tahay in ay ka gudbaan shaqsiyaadka aan la aqoon ee gawaarida wata.
Zeynab Xaabsey oo ah Guddoomiyaha degmada Warta Nabada ayaa la sheegay in ay ka bad baadday Qaraxa, waxaase la xaqiijiyay geerida askar ka mida ilaaladeeda iyo kuwa kale oo ku sugnaa Goobta oo aheyd kontorolka Ciidamada Nabad-sugidda.
Zeynab Xaabsey, waxa ay ka mid ahayd dadkii sida daran gu dhaawacmay weerarkii xarunta dowladda hoose ee lagu dilay Allaha u naxariistee, Guddoomiyihii Gobolka Banaadir, Injineer Yariisow, xilli ay xusid mudan in dad weerarkaas ka badbaaday marar kale la beegsaday.
Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa jira, lamase oga inta uu la egyahay, laamaha ammaanka ayaan wali wax war ah kasoo saarin weerarka oo ku soo beegmay xilli ay kaliya afar maalin ka dhiman tahay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay weeraro lagu hoobtay oo ay sabab u tahay habacsanaan dhanka amaanka ah oo loo aaneynayo wax qabad la’aanta madaxda oo indhaha ka qarsatay amniga, isla-markaana diiradda saaray in dib loo doorto.
Saraakiil Boolis ah, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in u jeedka qaraxa uu yahay carqaladeynta doorashada Madaxweynaha, taasoo la filayo in ay dhacdo 15-ka bishaan May oo Axadda ku beegan.